Maxay tahay sababta ay Taageerayaasha kooxda Arsenal u neceb yihiin Robin van Persie? – Gool FM
Maxay tahay sababta ay Taageerayaasha kooxda Arsenal u neceb yihiin Robin van Persie?
Haaruun August 13, 2019
(London) 12 Agoosto 2019. Robin van Persie waa dhalıyıhıı kooxaha Arsenal, Manchester Unıted ıyo xulka qaranka Holland, waa xıddıg ay aad u neceb yıhıin Jamaahiirta kooxda Arsenal.
Waxa ay Taageerayaasha Arsenal Robin van Persie ula baxeen, axmaq, caade-qaate, qiyaanoole iyo magacyo kale, inkastoo uu ka mid yahay dhaliyeyaashii ugu wanaagsaa ee abid soo mara horyaalka Premier League.
Haddaba maxay taageerayaasha Arsenal u neceb yihiin weeraryahan Robin van Persie, kaasoo ay Gunners la soo saxiixatay sanadkii 2004, maxaase ku kalifay inuu ku dabaal-dego kooxdiisii hore ee reer London markii uu ka horyimid isagoo xiran maaliyadda Man United?
Warbixintaan oo ah mid aad u dheer waxyaabo badanna aad ku ogaan doonto waxaa inoo diyaariyey oo soo jeedinaya Shaafici Maxamuud Nuur Shaafinho ee halkaan hoose ka daawo.
Tababare Klopp oo ka hadlay xilliga Becker uu dib ugu soo laabanayo garoomada & kulamada muhiimka ah uu seegayo oo la sii ogaaday
Cristiano Ronaldo oo ka warbixiyay hal arrin uusan waligiis ku ilaabi doonin Zidane